Wararka - Waa maxay PIM
PIM, oo sidoo kale loo yaqaan 'Passive Intermodulation', waa nooc ka mid ah cilladaha astaamaha. Maaddaama shabakadaha LTE ay aad ugu nugul yihiin PIM, sida loo ogaado loona yareeyo PIM waxay heshay feejignaan dheeri ah.
PIM waxaa soo saaray isku darka aan tooska ahayn ee u dhexeeya laba ama in ka badan mawjadaha xambaarayaasha, iyo calaamadda soo baxday waxay ka kooban tahay mawjaddo dheeri ah oo aan loo baahnayn ama alaabooyin is-dhexgal ah. Sida erayga "passive" ee magaca "passive intermodulation" micnaheedu waa isku mid, isku darka aan tooska ahayn ee kor ku xusan ee sababa PIM kuma lug laha aalado firfircoon, laakiin badanaa waxaa laga sameeyaa qalabka birta iyo aaladaha isku xiran. Geedi socodka, ama qaybo kale oo dadban oo nidaamka ku jira. Sababaha isku dhafka aan tooska ahayn waxaa ka mid noqon kara waxyaabaha soo socda:
• Cilladaha isku xidhka korantada: Maadaama oo aanu jirin meel dusha sare ka siman oo siman oo adduunka ah, waxa jiri kara aagag cufnaanta hadda jirta oo ka sarreeya meelaha lagala xidhiidhayo ee u dhexeeya sagxadaha kala duwan. Qaybahani waxay dhaliyaan kuleyl dariiqa xaddidan ee dariiqa, taasoo keentay isbeddel ku yimaada iska caabinta. Sababtaas awgeed, isku xiraha waa in had iyo jeer si sax ah loogu adkeeyo culeyska bartilmaameedka.
• Ugu yaraan hal lakab oo ah oksaydh khafiif ah ayaa ka jira meelaha birta badankood, taas oo sababi karta saamaynta tunnelka ama, marka la soo koobo, waxay u horseedi kartaa hoos u dhaca aagga wax tabinta. Dadka qaarkiis waxay u maleynayaan in dhacdadani ay soo saari karto saameynta Schottky. Tani waa sababta boolal daxal ah ama saqafyada birta ah ee daxalaystay ee ku dhow munaaradda gacanta ay u sababi karaan calaamado qalloocsan oo xoog leh oo PIM ah.
• Maaddooyinka Ferromagnetic: Qalabka sida birta waxay soo saari karaan khalkhal weyn oo PIM ah, sidaa darteed maaddooyinkaas looma isticmaali karo nidaamyada gacanta.
Shabakadaha siligga ah waxay noqdeen kuwo aad isugu murugsan maadaama nidaamyo badan iyo jiilal kala duwan oo nidaamyo ah ay bilaabeen in lagu isticmaalo isla goobta. Marka calaamadaha kala duwan la isku daro, PIM, oo sababa faragelinta calaamadaha LTE, ayaa la soo saaraa. Anteenooyinka, laba-dabaleyaasha, fiilooyinka, wasakhda ama iskuxirayaasha dabacsan, iyo qalabka RF ee waxyeelada leh iyo walxaha birta ah ee kuyaala agagaarka ama saldhiga saldhiga gacanta waxay noqon karaan ilaha PIM
Maaddaama faragelinta PIM ay saameyn weyn ku yeelan karto waxqabadka shabakadda LTE, hawlwadeennada wireless-ka iyo qandaraaslayaashu waxay muhiimad weyn ku leeyihiin cabirka PIM, meesha laga helayo iyo xakamaynta. Heerarka PIM ee la aqbali karo way ku kala duwan yihiin nidaamka illaa nidaamka. Tusaale ahaan, natiijooyinka baaritaanka Anritsu waxay muujinayaan in marka heerka PIM uu ka kordho -125dBm ilaa -105dBm, xawaaraha soo dejintu wuxuu hoos udhacayaa 18%, halka kii hore iyo kan dambe labadaba loo tixgelinayo inay yihiin heerarka PIM ee la aqbali karo.
Waa kuwee qaybaha loo baahan yahay in laga baaro PIM?
Guud ahaan, qayb kastaa waxay maraysaa baaritaanka PIM inta lagu jiro naqshadeynta iyo soo saarista si loo hubiyo inaysan u noqon il muhiim ah PIM ka dib rakibidda. Intaa waxaa sii dheer, maadaama saxnaanta isku xirnaanta ay muhiim u tahay xakamaynta PIM, habka rakibida sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah xakamaynta PIM. Nidaamka anteenada loo qaybiyey, waxaa mararka qaarkood loo baahan yahay in lagu sameeyo baaritaanka PIM ee nidaamka oo dhan iyo sidoo kale baaritaanka PIM ee qayb kasta. Maanta, dadku waxay sii kordhayaan qaadashada qalabka PIM-shahaado haysta. Tusaale ahaan, anteenooyinka ka hooseeya -150dBc waxaa loo tixgelin karaa u hoggaansamida PIM, qeexitaannada noocaas ahna waxay noqonayaan kuwo adag.
Intaas waxaa sii dheer, habka xulashada goobta ee goobta gacanta, gaar ahaan ka hor inta aan la dhisin aaladda gacanta iyo anteenada, iyo wajiga rakibaadda ee xigta, sidoo kale waxay ku lug leedahay qiimeynta PIM.
Kingtone wuxuu bixiyaa shirar hoose oo PIM ah, isku xirayaasha, adapters-ka, isku-darka isku-dhafan-isku-dhafan, isku-darka isku-darka, duplexers, splitters, couplers iyo anteeno si loo buuxiyo shuruudaha kala duwan ee la xiriira PIM.